Waa maxay Plex iyo sidee bay uga shaqaysaa Smart TV -yada | Madasha Mobile -ka
Daniel Terrasa | 25/09/2021 12:00 | Barnaamijyada
Hadaad maqashay Plex iyo wax kasta oo ay u soo bandhigi karto isticmaaleyaasheeda, waa hubaal inay xiisaysey xiisahaaga. Qoraalkan waxaan ku sharxi doonnaa waxa Plex yahay iyo sida ay u shaqeyso. Si faahfaahsan iyo xalal xiiso leh si aad uga faa’idaysato.
Plex waa dhammaystiran yahay adeegga durdurinta warbaahinnada waqtiga-dhabta ah. Waad ku mahadsan tahay, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ka aragno nuxurka aaladaha kale, annaga oo aan ku kaydin annaga. Qaabkan, tusaale ahaan, filimada iyo taxanaha muusikada, sawirrada iyo wixii kale ee ku jira kombiyuutar ayaa lagu ciyaari karaa taleefanka casriga ah.
Mashruuca Plex wuxuu asalkiisu ka soo jeedaa hindise gaar loo leeyahay 2010. Fikradda asalka ahi waxay ka timid bilowga Ameerika Plex, Inc.. Shirkadan ayaa mas'uul ka ah horumarinta Plex Media Server iyo appka. Dhammaan software -kan ayaa ka diiwaan gashan astaanta “Plex”.
1 Waa maxay Plex?
2 Soo dejiso oo rakib Plex
3 U isticmaal Plex aaladaha kale (Smart TV)
3.1 Sida Plex loogu xiro Smart TV
3.2 Dhibaatooyinka isku xirka iyo xalalka
3.3 Wadaag nuxurka
4 Ka warran haddii aanan guriga ku haysan Smart TV?
Waa maxay Plex?
Plex waa codsi noo oggolaanaya kombiyuutarkeena u rogo xarun warbaahin oo weyn. Shaqadeeda ugu weyni waa in la aqoonsado dhammaan faylasha farriimaha badan ee aan ku kaydinnay fayladeena si aan u habaynno hadhow iyo sidan abuuro wax sidayada oo kale ah Netflix.
Waa hagaag, laga yaabee taasi inay ka timid ku -dayasho ama la -tartanid Netflix, sheegasho xoogaa la buunbuuniyey, in kasta oo fikraddu isku mid tahay. In kasta oo ay la socoto Netflix waa madal lafteeda oo awood u siineysa nuxurka aan ka heli karno server -yadeeda, annaga oo adeegsanayna Plex annaga ayaa ah kuwa ku daraya nuxurka war -baahinta si aan u jeclaanno. Taasina waxay noqon kartaa faa'iido weyn. Tan waxaa laga sameeyaa faylka ku jira kombiyuutarka ee aan hore u soo xulnay sidii "Faylka xididka". Xadka kaydinta? Midda noo oggolaanaysa awoodda disk -ga adag.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan Plex waa inay tahay la jaan qaada ku dhawaad ​​dhammaan qaabab maqal iyo muuqaal ah oo caan ah. Wax yar oo muhiim ah ayaa ah suurtogalnimada inay na siiso inaan ku abaabulno faylalkayaga mawduucyo ama nooc ka kooban, sida aan jecel nahay. Waxa kale oo xiiso leh in la awoodo in meel fog laga xiro kanaallada kale ee internetka.
Tilmaamo badan oo Plex ah oo qabow: Marka barnaamijka la dejiyo, waxaad ka heli kartaa qalab kasta. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku rakibto dalabka faylka Plex Media Server kombiyuutarka halkaasoo lagu hayo martida faylasha warbaahinada badan oo hubi inuu firfircoon yahay marka la isticmaalayo barxadda.
Hab kale oo loo sameeyo waa iyada oo la isticmaalayo Macaamiil Plex, kaas oo leh qoraallo gaar ah oo loogu talagalay dhammaan aaladaha: Android, iOS, GNU / Linux, macOS, Windows, SmartTV, Chromecast iyo xitaa consoles PlayStation iyo Xbox. Markaa, waxaan ku arki karnaa fiidiyowyadeenna mid kasta oo ka mid ah.
Soo dejiso oo rakib Plex
Tallaabada ugu horreysa ee adeegsiga Plex waa soo dejinta barnaamijka Plex Media Server ka website-ka rasmiga ah. Kaliya waa inaad gasho oo guji badhanka «Soo dejiso». Taas ka dib, menu ayaa lagu soo bandhigi doonaa kaas oo ay tahay inaad doorato nooca ku habboon nidaam kasta oo hawlgal. Kaliya waa inaan doorannaa kuweenna.
Ka dib markii la soo degsado, wax yar ka hor inta aan la bilaabin habka rakibidda, waxaan fursad u leenahay inaan dooro galka aan rabno inaan ku rakibno arjiga bogga soo dhawaynta. Tani waa inaad gujisaa badhanka "Kala xulasho" oo dooro faylka loo socdo kombuyuutarkeena. Marka tan la sameeyo, waxaan gujin karnaa badhanka "Ku rakib" habkuna si toos ah ayuu u socon doonaa.
Marka howshan la dhammeeyo, kaliya guji badhanka "Tuur" si aad u bilowdo arjiga. Marka xigta, bog ayaa ka furi doona biraawsarka kaas oo ay tahay inaan iska diiwaangelinno annaga oo gelineyna magaca isticmaalaha, cinwaanka iimaylka la xiriira iyo furaha sirta ah.
en el guddi gacanta main waxaan marka hore tagnaa tabka "Magaca", kaas oo aan ka helno liis aan ku qori doonno magaca server -kayada Plex. Taas ka dib waxaan riixaynaa badhanka "Xiga" si aad u tagto "Maktabadda Warbaahinta". Sida caadiga ah laba kaliya ayaa muuqda: sawirro iyo muusig, in kasta oo aan abuuri karno inta aan rabno si fudud oo ikhtiyaarka ah "Ku dar maktabad". Aragtida qaabka maktabadda aad bay waxtar ugu leedahay in lagu dhex -maro waxyaabaha ku jira iyada oo loo marayo qaybo (nooc, magac, sannad, iwm.)
Intaas ka dib waxaan bilaabi karnaa maareynta nuxurkayaga, iyo wax walba, ku raaxeysiga. Labadaba kombiyuutarka iyo aaladaha kaleba, sidaan hoos ku sharaxnay:
U isticmaal Plex aaladaha kale (Smart TV)
Xaqiiqdii waa astaantan Plex ka dhigaysa kheyraad xiiso leh. Waxaa loo adeegsan karaa kiniinnada, mobilada iyo aaladaha kale. Habka loo sameeyo mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa la mid ah, oo leh kala duwanaansho mid kasta. Waxay asal ahaan ka kooban tahay soo dejinta barnaamijka Plex oo ku xira server -keena.
Sida Plex loogu xiro Smart TV
Habsocodku wuxuu la mid yahay kii loo isticmaalay in lagu xiro aaladaha kale sida kiniiniyada ama taleefannada casriga ah. Waxa jira dhawr waxyaalood oo kala duwan. Si aad u fuliso xiriirka ka dhexeeya Plex iyo Smart TV waa inaad fulisaa labadan talaabo ee fudud:
Si aad ugu bilowdo, waa inaad gal TV -ga Smart, aad dukaanka app -ka iyo hel barnaamijka Plex. Kaliya waa inaad soo dejisaa, kaas oo si otomaatig ah loogu kaydin doonaa maktabadda
Markaa waa inaad maktabadda fur (ka hor intaadan ku galin koontada adeeggan, isla sidii aan u isticmaali lahayn si aan u abuurno server -ka) oo gal aqoonsiyadayada username iyo password.
Tani waa intaas oo dhan. Intaas ka dib waxaan joogi doonaa gudaha Plex oo waxaan awoodi doonnaa inaan ka aragno dhammaan waxyaabaha ay ku siiso TV -ga caqliga leh. Si aad u hesho waxyaabahayaga gaarka ah ee aan ku hayno server -keena, waa inaad tagtaa ikhtiyaarka ah «+ Dheeraad ah».
Dhibaatooyinka isku xirka iyo xalalka
Hagaajinta Ogaanshaha Fiidiyaha Fiidyowyada
Inkasta oo habsocodku uu yahay mid aad u fudud, marmarka qaarkood wuxuu soo bandhigi karaa dhibaatooyin qaarkood. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan wuxuu dhacaa marka Plex ma oga waxa ku jira. Waxay noqon kartaa waxoogaa xanaaq badan, laakiin waa arrin sahlan in la saxo.
Si tan loo sameeyo, waxaan marka hore aadi doonnaa adeegga shabakadda oo waxaan geli doonnaa faylka ay ku jiraan waxyaabaha aynaan arki karin. Waxaan gujin doonaa sumadda saddexda dhibic ee ku jira faylka su'aasha ku jira. Ikhtiyaarro taxane ah ayaa hoos lagu soo bandhigi doonaa, oo ay ku jiraan kuwa na xiiseeya: "Raadi faylasha maktabadda". Kaliya tan waxaan ku qasbi doonaa Plex inuu sameeyo falanqaynta galka maxalliga ah, oo muujinaya dhammaan waxyaabaha la cusbooneysiiyay.
Dhibaato kale oo aad u badan ayaa ah ku guuldareysiga ogaanshaha fiidyowyada. Sidoo kale kiiskan habka lagu xaliyo waa mid fudud:
In version web, waa inaad gashaa galka meesha fiidiyowga lagu martiqaado oo guji batoonka qalin qalin taasi waxay soo baxdaa markaan dul dul -dul -qaadno cursor -ka jiirka. Halkaas waxaan ka beddeli karnaa dhammaan macluumaadka ku saabsan fiidiyaha su'aasha ah.
Midda na danaysa waa ta "Boosta", kaas oo ka muuqda sawirka aqoonsigu. Kaliya jiid si aad ugu muuqato mid la heli karo si aad u beddesho daboolka.
Waxaa jira ikhtiyaarka ah wadaag waxyaabaha ku jira oo ka mid ah adeegeena warbaahinada badan ee asxaabtayada. Sidan oo kale, iyagana waxay ka daawan karaan fiidiyowyadeena TV -ga Smart. Si tan loo sameeyo, waa inaan galnaa nooca shabakadda oo aan raacnaa tallaabooyinkan:
Marka hore waxaan gujin doonaa saddex dhibic icon oo waxaan dooran doonaa ikhtiyaarka "Wadaag".
Markaas waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa weydiiso iimaylka loo adeegsaday Plex ama magaca adeegsadaha saaxiibbadayada, si aad ugu gasho ikhtiyaarkan.
Marka tan la sameeyo, daaqad ayaa lagu soo bandhigaa dhammaan faylasha. dooro kuwa aad rabto inaad wadaagto.
Markaa, ka dib dhowr daqiiqo oo sugitaan ah (waxay ku xirnaan doontaa xaddiga iyo nooca waxyaabaha ku jira), xiriiradayada ayaa si otomaatig ah u heli doona server -kayada iyo waxyaabaha hore loo doortay.
Ka warran haddii aanan guriga ku haysan Smart TV?
Ma aha in qof walba guriga ku haysto TV caqli badan, laakiin taasi maahan inay caqabad ku noqoto ku raaxaysiga waxyaabaha Plex ee aaladaha kale iyo warbaahinta. Dhammaadka maalinta waxaan ka hadleynaa adeegga isku -dhufashada badan. Taasina waxay ina hor dhigaysaa fursado badan oo kala duwan.
Haddaba haddii fikirkaagu yahay TV -gaaga ku hayso Plex, laakiin ma lihid Smart TV, kuwani waa kuwo kale beddelaad:
TV Dabka Amazon.
Chromecast oo leh Google TV.
Soo koobid ahaan, waxaan ku qeexi karnaa Plex inuu yahay aaladda ugu fiican haysato Netflix noo gaar ah guriga. Qaab loo helo dhammaan waxyaabaha ku jira maqalka maqalka oo si fiican loo habeeyay loona kala saaray si aan ugu raaxaysan karno qolkayaga fadhiga. Iyada oo loo marayo TV -ga Smart -ka ah ama mid kasta oo ka mid ah beddellada aan kor ku soo sheegnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » Waa maxay Plex iyo sidee buu uga shaqeeyaa TV -yada Smart